Nagu saabsan - Ningbo Huayu Network Technology Co. Ltd.
Raadi Waxbadan oo kusaabsan Nomi
8 nooc oo dhameystiran
si madaxbanaan loo soo saaray nuxurka baridda.
U hogaansanaanta fikradda aasaasiga ah ee is-weydaarsiga dhaqanka, luqadda ugu horreysa, waxaan qaadannaa qaabka aasaasiga ah ee Macallimiinta Shiinaha, Ardayda adduunka oo dhan si ay u qabtaan barista Shiinaha.
In kabadan 500 oo arday ayaa nala baro Shiinaha
Waxyaabaheena mid-ka-badan, isdhexgalka ku saleysan wax soo saarka aasaasiga ah ayaa si guul leh looga bilaabay dalal badan oo adduunka ah waxaana si ballaaran u ammaanay ardayda dibedda.
1200 Nomi Shiine ah oo khadka tooska ah ka isticmaala ayaa ka ururay in ka badan 12,000 saacadood oo waqti barasho ah khadka tooska ah.
Maxaan Shiinaha ugu baranaynaa Nomi?
Qaabka barashada faraxsanHalkan, waxaad kula kulmi doontaa fasalka ugu xiisaha badan ee is-dhexgalka. Waxaan u adeegsanaa barista xaaladaha, ciyaaraha iyo habab kale si aan uga dhigno carruurta inay wax bartaan oo ay ku jeclaadaan Shiinaha. Koorsooyin gaar ah oo mid-ilaa-hal ah, midna loogu talagalay afar fasal oo yaryar, ayaa waxbarashada carruurta ka dhigaysa mid ka sii duwan.
Koorsooyin badan oo kala duwan: Halkan, waxaad ka heli kartaa koorsooyinka ugu habboon. Macno malahan inaad ka bilaabaneyso xoqitaan ama Shiineys heer sare ah, waxaad ka heli kartaa koorsooyinka saxda ah halkan. Shiine Aasaasiga Aasaasiga ah, akhriska, qorista, ku hadalka, ku hadalka sawirka, HSK, AP Chinese ... Waxaa jira koorsooyin xisaabeed oo dhammaystiran oo aad adigu dooran karto.
Barashada bulshada: Halkaan, kaliya kulama kulmi kartid macalin maad ah, laakiin sidoo kale waxaad ka caawin kartaa cunugaada inuu helo lammaane uu wax la barto, si aadan mar dambe kaligaa ugu noqon doonin barashada Shiinaha.
Macallimiin tiro badan:Halkan, waxaad ka heli kartaa dhammaan noocyada macallimiinta, maad, feejignaan, dulqaad badan, adag oo culus ... Looma baahna in laga walwalo macallimiinta oo aan fahmin carruurta. Macallimiinteenna Shiinaha dhammaantood waxay leeyihiin khibrad baris shisheeye. Tababbarka waxbarista ee saxda ah wuxuu macallimiinteenna ka dhigayaa kuwo heer sare ah.
Jawaabta waqtiga dhabta ah ee adeegga macaamiisha: Halkan, waxaad kula kulmi doontaa adeegga macaamiisha ugu buka. Haddii ardayda ama waalidku ay la kulmaan wax dhibaato ah, macallimiinta adeegga macmiilka ayaa kaa caawin doona, si habraaca waxbarashadda ee ilmuhu u noqdo mid habsami leh, si waalidku u dareemo xasilooni dheeraad ah.
Miss Becky, oo u dhalatay Shiinaha, waxay haysataa shahaadada koowaad ee heerka koowaad ee waxbarashada Shiinaha. Waxay mar bartay koorsooyinka Shiinaha ee jaamacadda waxayna leedahay xirfado Shiinaha u fiican. Waxaan haystaa ilaa 4 sano oo khibrad macallinnimo ah. Mar baan baray Shiine ardayda dhigata Maldives waxaanan kaqaybqaatay barnaamijka sarrifka Shiinaha ee iskuulada caalamiga ah ee Maraykanka.
Macallin fasal gaar ah
Mr. Li wuxuu ka yimid Shiinaha wuxuuna haystaa shahaadada koowaad ee jaamacadda. Wuxuu leeyahay khibrad baris barad badan wuxuuna ku raaxeeyaa la shaqeynta carruurta. Wuxuu siin doonaa fasal xiiso leh ardayda oo ka farxin doona inay waxbartaan. Li wuxuu awoodaa inuu dhexgeliyo habka waxbarista THE TPR ee barida internetka wuxuuna ardayda ka caawin karaa inay fahmaan waxa ku jira. Wuxuu ku wanaagsan yahay adeegsiga saamaynta muuqaalka, ha ahaato awood koronto ama sabuurad, wuxuu isticmaali karaa astaamo si uu u soo jiito dareenka ardayda. Wuxuu ku dhiiri gelin doonaa ardaydiisa inay hadlaan oo ay adeegsadaan jumlado dhameystiran sida ugu macquulsan.
Jo wuxuu ka yimid Shiinaha wuxuuna haystaa shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee Cilmiga Caalamiga ah ee Shiinaha. Jo wuxuu leeyahay 4 sano oo khibrad macallinimo ah, oo ay kujirto waxbarida dugsiyada hoose iyo dhexe. Ma sugi karto inay ku aragto. Carruurtu way jeclaan doonaan barashada Jo. Jo wuxuu rajeynayaa inuu arko carruurta qurxoon ee ku jirta fasalka Nomi. Kaalay oo ku soo biir iyada!
waxaan rajeynayaa inaan kula kulmo fasalka Nomi!